पाल्पाको रामपुरमा रहेको अनौठो गुफा जसलाई हेर्नेको लाग्छ हजारौ मानिसको भीड ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/पाल्पाको रामपुरमा रहेको अनौठो गुफा जसलाई हेर्नेको लाग्छ हजारौ मानिसको भीड !
गुफासम्म पुग्नका लागि रामपुर नगरपालिका–४ ले बाटो निर्माणको काम थालेको छ । विज्ञको टोलीले अध्ययन गरेपछि मात्रै गुफामा पस्ने व्यवस्था मिलाइने र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने नगरपालिकाको योजना छ । सुनापति न्युजबाट